Onye na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè Syria bụ Necip El Fares kwuru na pasent 90 nke ụzọ ụgbọ ala dị n’agbata Aleppo na Damaskọs, ndị agha ahụ bibiri, na-enwe mmezi, na ha nwere olile anya na ụgbọ okporo ígwè ga-amalite n’ọdụ ụgbọ mmiri ahụ ka ọnwa abụọ gachara. [More ...]
Israel nke El-Al Airlines kwụsịrị ụgbọ elu ya na Turkey afọ 13 gara aga, mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, dịka nkwupụta nke ụlọ ọrụ ahụ kwuru, ụlọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu na-abụ ụgbọ elu abụọ kwa izu. Zaa ozi banyere akwụkwọ akụkọ Şalom [More ...]
Railway China nke China na-emepe emepe
N’okporo ụzọ ụgbọ oloko ọhụrụ ahụ guzobere maka ụgbọ njem ebufe n’etiti China na Turkmenistan, ụgbọ okporo ígwè na-ebu ibu site na ọdụ Jinan Nan dị na China rutere n’ọdụ ụgbọ mmiri Gıpcak nke Turkmenistan site n’ọdụ ụgbọ mmiri Kazakhstan Horgos, Altınkol na Bolaşak. [More ...]
Njikọ ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti Turkmenistan, Uzbekistan na Iran
Na Mee 21, 2020, mkparịta ụka dị n'etiti ndị na-ahụ maka okporo ụzọ Railway Turkmenistan, Republic nke Uzbekistan na Islamic Republic nke Iran, n'ụlọ nke Ralọ Ọrụ Ragbọ Okporo Turkish. Ọzọkwa, Uzbekistan Railways Authority na Iran RAI "Railways of Islamic Republic" [More ...]
Site na mmecha nke uzo di elu di n'etiti Tokyo na Osaka, oge njem bidoro malitere oge ohuru na njem ụgbọ oloko. Shinkansen mepere tupu oge asọmpi Oge Ochie nke 1964 na Tokyo (nke pụtara “eriri ọhụrụ” na Japanese) [More ...]
Mbupu mmiri ara ehi na mmiri ara ehi mepere China
Minista ahia ahia Ruhsar Pekcan kọrọ na Turkey buliri ihe mgbochi maka mbupụ mmiri ara ehi na ngwaahịa mmiri ara ehi ga-enwe na China. Minista Pekcan tinyere na akaụntụ Twitter ya, ebe Ngalaba Azụmaahịa na andlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Ugbo na Ọhịa [More ...]
Ilzọ Transgbọ oloko Trans-Siberian
Zọ okporo ụzọ Trans-Siberian, nke gafere 10.000 kilomita, arụchara na 1916, ọ bụ ụzọ ụgbọ oloko kacha ogologo ma dị oke ọnụ. Transzọ Trans-Siberian na-ebelata okporo ụzọ, nke na-ewe ọnwa site na Moscow ruo Vladivostok, ruo ụbọchị asatọ. [More ...]
China: Oge mbu maka nyocha Covid-19
China ekwuola ọkwa na ọ bụ mmalite ịmalite nyocha Covid-19. Minista mba ofesi na China SözcüSü kwuru na o ruola n'isi ịmalite nyocha banyere nje corona, nke gburu ihe karịrị mmadụ 300.000 n'ụwa niile. [More ...]
Mgbe akwụkwọ Barry S. Turner na Michael Radford, ndị a hụrụ dị ka isi okwu ndị a pụrụ ịdabere na ha maka akụkọ ihe mere eme nke njem ụgbọ oloko na Saịprọs, nke hapụrụ akara ha na oge Ọchịchị Britain, ha jikwa, na ozi sitere n'aka ndị agadi bi n'oge ahụ. [More ...]
Ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke Hicaz
E wuru ọdụ Tabuk n’afọ 1906 (Hijri 1324). 31. Thislọ ọrụ a bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ kacha mkpa ma dịkwa ukwuu n'okporo ụzọ okporo ụzọ Hicaz. Mmasị na ọdụ a bụ mkpa nke obodo a [More ...]
Ọdụ ụgbọ oloko nke Hicaz
Ebe Muhit, nke ewuru n’afọ 1909 (Hijri 1327), dị kilomita 19 site na ọdụ Hafire. Na mgbakwunye na nnukwu ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, a na-enwekwa ogige dị mma ma na-enwe ihe ntụchi. Ọzọkwa gburugburu [More ...]
Ọdụ ụgbọ oloko nke Hicaz Railway Mashhad
Ewuru na 1909 (Hijri 1327), ọdụ a bụ 13km site na ọdụ mbụ. Ebe a mejupụtara naanị ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ. Thelọ ọrụ ahụ, nke nwere myirịta na ọdụ ndị gara aga, bụ nnukwu ụlọ nwere ụlọ abụọ [More ...]
Ọdụ ụgbọ oloko nke Hicaz Railway Medina
Ọ bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ oloko ikpeazụ na isi nke Hicaz Railway. Lọ ọrụ a bụ kilomita iri na ise site na ọdụ ụgbọelu gara aga. Ebe a na-eji okwute ojii kpuchie ọtụtụ ụlọ. 15 mita n'ogologo na mita 600 n'obosara [More ...]
Ogige ụgbọ okporo ígwè Medina High Speed
Companylọ ọrụ Turkish Yapi Madinah High Speed ​​Train Station n'ime ogo nke 450km ogologo Haremeyn High Speed ​​Train Project, nke jikọtara obodo Mak, Jeddah, King Abdullah Economic City na Medina, nke emechara na Saudi Arabia. [More ...]
Dabere na nkwupụta nke ndị agha Russia, ọnụ ọgụgụ ndị agha bụ ndị mere nke ọma maka ule COVID-19 ruru 901 ruo taa. Na nkwupụta ahụ, ndị agha 19 nke 324 ndị nwere ezi maka nnwale COVID-176 bụ ndị ụlọ ọgwụ n'okpuru Ministry of Defense nke Russia. [More ...]
Na nkwupụta e mere na akaụntụ Twitter nke General Directorate of Military Industry of the Saudi of Saudi Arabia (GAMI), ekwuputara na a malitere ọmụmụ ihe maka mmepe na mmepụta nke sistemụ ụgbọ elu na-achọghị. Nkwupụta e mere, kalenda ọrụ ahụ [More ...]
Saab na-eburu ụzọ izizi GlobalEye AEW & C gaa United Arab Emirates
Saab kwupụtara na Eprel 29, 2020 na enyefeela ụgbọelu GlobalEye AEW & C mbụ na United Arab Emirates. United Arab Emirates emeela iwu GlobalEye AEW & C zuru ezu. United arab [More ...]
Ọgbọ Chain nke ise nke China Maglev Train Zoro Uzo nke Ọma
Generationgbọ ala maglev nke ise nke ụlọ ọrụ China CRRC mepụtara ule ọma ya. N'ihi ule ndị a na-eme n'obodo Tangshan, ekwuputara na weebụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ na ọsọ ọsọ nke 160 km / h ruru. E jiri ya tụnyere sistemu maglev ndị ọzọ [More ...]
E meghewo Caspian ọdụ ụgbọ mmiri nke mbupụ site na Kars na Eprel 18; Nwanna mba Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan na 940 mita arụnyere na ụgbọ okporo ígwè nke akpa ngwaahịa exported na 82 Baku Alat Uzbekistan [More ...]
Azerbaijan Ministry of Defense, si Turkey Mechanical na Chemical Industry Corporation (MKEK) mepụtara KNT-76 na-akwadebe ịzụta SRifle. Tdị Manga KNT-76 7.62x51mm, nke ejiri Chemicallọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ngwá ụlọ mepụtara ụlọ ọrụ [More ...]
Egburu Ndị ọrụ Ahụike Worldwa Ọchịchị na Mwakpo na Mianmaa
Ndị ọrụ Healthtù Ahụ Ike announcedwa mara ọkwa na onye ọkwọ ụgbọala nwụrụ na mwakpo na Myanmar. Ọ kwụsịrị onye ọkwọ ụgbọala nke ndị ọrịa Corona jiri mkpo ya na ule ya na mpaghara Rakhine nke Mianmaa, mgbe ọ merụrụ ahụ na mwakpo ahụ, o bi n'ụlọ ọgwụ ebe ewepụrụ ya. [More ...]
USA: Russia na-anwale Mpụga Igwe Ọdụdọ Satellite
United States Space Command (USSPACECOM) kwupụtara na Eprel 15, 2020 na Russia anwalewo ma soro ngwa ogu nke satịlaịtị (DA-ASAT). Site n'aka US Force Force Commander General John W. Raymond [More ...]